Redmi Rịba ama 10T, mobile dị ka Redmi Rịba ama 10 5G, ma na 4G | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 10T, mkpanaka dịka Redmi Rịba ama 10 5G, mana yana 4G
Aaron Rivas | 29/06/2021 02:10 | Emelitere ka 29/06/2021 02:13 | Noticias, Xiaomi
Xiaomi amalitela onu ogugu ohuru na ahia, nke biara dika Redmi Rịba ama 10T. Ama ama a bụ ihe ndekọ Redmi Rịba ama 10 5G. Ihe dị iche nke na-apụ apụ, mana ọ bụghị maka abamuru nke ekwentị ọhụrụ ahụ, bụ enweghị njikọ 5G. Na, na ajụjụ, Redmi Rịba ama 10T naanị nwere nkwado maka 4G.
N'ime ndị ọzọ, anyị nwere otu njirimara na nkọwa ahụ na ekwentị abụọ, nke hapụrụ anyị Mediatek's Dimensity 700 processor chipset dị ka ọrụ maka arụmọrụ nke ngwaọrụ etiti.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụrụ Xiaomi Redmi Rịba ama 10T na-enweghị 5G
2 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụrụ Xiaomi Redmi Rịba ama 10T na-enweghị 5G
Ihe mbụ ị ga-ahụ bụ na Ihe ngosi Redmi Rịba ama 10T na-enweghị njikọ 5G na-egosipụta otu atụmatụ na nrụpụta nke Redmi Note 10 5G. Ya mere, o nwere otu ọdịdị ma na-enye otu mmetụta na aka. N'echiche a, akụkụ ya na ịdị arọ ya, n'otu n'otu, 161,81 x 75,34 x 8,92 mm na 190 gram.
Ihe Nleba Redmi 10T biara ihe IPS LCD teknụzụ teknụzụ na-etu ọnụ diagonal-inch 6.5, mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.140 x 1.080 na ọnụego ume ọhụrụ nke 90 Hz. Ihe ọzọ bụ na panel a nwere oghere na ihuenyo ahụ na akụkụ etiti nke elu maka igwefoto n'ihu 8 MP na oghere f / 2.0.
Usoro igwefoto azụ, nke na nke a bụkwa nke atọ, na-eji ya ihe mmetụta bụ isi nke 48 MP nwere oghere f / 1.79 na anya abụọ MP 2 nwere oghere f / 2.4 maka mmetụta nsogbu n'ọhịa (ọnọdụ bokeh) na foto macro. Enwere ọkụ ọkụ abụọ maka ọkụ ọkụ.
Dị ka anyị kwuru, na Dimensity 700 bụ processor chipset nke na-ebi n'ime obi nke ekwentị ọhụụ ma rute nha elekere kacha elu nke 2.2 GHz, na mgbakwunye ịbụ akụkụ 7 nm. Ọ bụ ezie na SoC a dakọtara na 5G, nyere modem ọ na-ejikọ, na ihe nlereanya a, agbanyụọla nkwado a maka ụfọdụ ihe kpatara ya, ya mere ọ dakọtara na 2G, 3G na 4G netwọkụ. N'otu oge ahụ, enwere 4/6 GB Ram na oghere 64/128 GB dị n'ime, nke enwere ike ịgbasa site na kaadị microSD.
Ihe ọhụrụ Redmi Rịba ama 10T nwekwara a n'akụkụ ugwu akara mkpisiaka agụ, na-ahapụ oghere azụ nke otu ihe dị ọcha maka usoro igwefoto. N'aka nke ya, ama ama nwere Wi-Fi 5, NFC, obere ihe eji eme ihe maka ekweisi na ihe mmetụta infrared maka ịchịkwa ngwaọrụ ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, batrị nke ekwentị a na-anọgide na ikike nke 5.000 mAh ma dakọtara na nkwado maka ịkwanye ngwa ngwa nke 18 W. Nke a bụ ebubo site n'ọdụ ụgbọ USB-C.
XIOAMI REDMI MARA 10T
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na FullHD + mkpebi nke 2.340 x 1.080 pikselụ / Corning ozodimgba iko 3
Nhazi Mediatek Dimentisy 700 na-enweghị njikọ 5G
Ohere TERLỌ N'IME 64/128 GB na mmụba nchekwa site na kaadi microSD
GHARA CAMERAS 48 MP isi na f / 1.79 aperture + 2 MP Bokeh sensor na f / 2.4 aperture + 2 MP macro lens nwere f / 2.4 aperture
CAMERA N'IHU 8 MP nwere oghere f / 2.0
UMUAKA 5.000 mAh na 30-watt Warp Charge ngwa ngwa (5 volts / 6 amps)
OS A gam akporo 10 n'okpuru MIUI 12
Njikọ Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Side Mount Fingerprint Reader / Nghọta ihu / USB-C
Mbibi na ibu ibu 161.81 x 75.34 x 8.92 mm na 190 g
A malitelarị Xiaomi Redmi Note 10T ọhụrụ na ụdị na Russia. N'oge a, ekwentị dị naanị ebe ahụ, mana a na-atụ anya na n'oge na-adịghị anya ọ ga-erute ahịa Europe yana, ya mere, Spanish. N'otu oge ahụ, ọ ga-amalite n'oge na-adịghị anya n'ụwa niile. Versionsdị ha na ọnụahịa ha kwupụtara ruo ugbu a bụ ndị na-esonụ:
Redmi Rịba ama 10T 4GB Ram na 64GB ROM: ekwuputaghi ya.
Redmi Rịba ama 10T 4 RAM na 128 GB ROM: 19.990 rubles (ihe ruru 230 euro na ọnụego mgbanwe).
Redmi Rịba ama 10T 6GB RAM na 128GB ROM: ekwuputaghi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 10T, mkpanaka dịka Redmi Rịba ama 10 5G, mana yana 4G
Top 5 arụpụtaghị ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: nyocha doro anya